Coral Reef: ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဘလော့ရွာသူ၊ ရွာသားများ (ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပို့စ်)
ညီရဲ said on August 30, 2011 at 11:49 PM
ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပိုစ့်လေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ နောင်လဲ စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
khin oo may said on August 31, 2011 at 2:00 AM
Nyi Linn Thit said on August 31, 2011 at 2:50 AM
မဇွန်က လူချင်းဆုံဖူးတဲ့ သူတွေ တကယ့်ကို အများကြီးပဲ၊ ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂါကို အပြင်မှာ ဆုံဖူးရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပါပဲ၊ ကျနော်ကတော့ (ဓါတ်ပုံတွေ တင်ထားတဲ့) ဘလော့ဂါ တချို့ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မမြင်ဖူး၊ မဆုံဖူးပါဘူး၊ အခုလို အမှတ်တရနေ့မှာ ကိုယ်ဆုံခဲ့ဖူး၊ ဆုံတွေ့ချင်တဲ့ သူတွေကို တန်းစီပြီး နှုတ်ဆက်ရတာ တကယ့်ကိုပဲ နွေးထွေးလှတယ်...။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on August 31, 2011 at 5:39 AM
ဖျတ်ကနဲဖျတ်ကနဲ မြင်ရတာမျိုးက ဆယ်လစ်ဘရစ်တီတွေကို တွေ့ရသလိုမျိုး ခံစားရမှာပဲနော်....
အင်ကြင်းသန့် said on August 31, 2011 at 7:49 AM
ချစ်စရာကောင်းပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ မဇွန်နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့အပြင် ရာသီဖွားချင်းလည်းတူ အကြိုက်တော်တော်များများပါတူနေတတ်ကြတာ ဂျင်းအတွက်တော့ထူးခြားတဲ့ရေစက်ပါ။
မမ နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ....။
AMK said on August 31, 2011 at 9:39 AM
"အသံချိုချိုလေးကြားရတဲ့ မမခင်ဦးမေ" မယုံဘူး ဘယ်တော့မှလဲ ဖုန်းနံပတ်ပေးဖူး အသက် ၃၀ ကျော်တဲ့ကောင်လေး မို့ လို့ ပေးဘူးတဲ့ဗျာ နဲနဲလေး အစွန်းထွက် သွားတာကိုများ international callခေါ်ရမှာကို စိတ်နာတယ် ကြီးတော်ကို ကိုမဆလာနဲ့ တိုင်ဦးမယ် all the best ပါမဇွန်မိုးစက်ရေ
noblemoe said on August 31, 2011 at 1:00 PM
Happy Blog Day ပါမမ။
မိုးခါး said on August 31, 2011 at 5:10 PM
မဇွန်ကိုတော့ ညီမက ချစ်ပြီးသားပဲ ..း))
စိတ်လေးကိုရော မျက်နှာလေးကိုရော ..
Anonymous said on August 31, 2011 at 8:08 PM
မဇွန် ကို တလောကမှ ပူပူနွေးနွေး မဟုတ်ပဲ ဟိုးစောကြီးထဲက မဇွန် ရယ်လို့ မသိပဲ အသံလေးကြားရုံ နဲ့ အသံလေး က ချစ်စရာလေးဆိုပီး မေးခဲ့ သိနှင့်ခဲ့ပါတယ်။း)
စာတွေ များကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေနော်း)
ပန်းချီ said on August 31, 2011 at 9:15 PM
ကောမန့်တွေ သိပ်မချန်ဖြစ်ပေမယ့် စာတွေမကြာမခဏလာဖတ်လေ့ရှိပါတယ်..မဇွန်ရေးတဲ့ ပါရီဆည်းဆာ ကိုသိပ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်း)) ။ မြင်ဖူးတယ်ဆိုလို့ ဘယ်နေရာမှာများလဲလို့ စဉ်းစားခန်းဝင်နေတား))) နာမည်ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရလို့ ကြည်နူးရပါတယ်ရှင်..။
ပျော်ရွှင်စရာဘလော့ဂ်နေ့ပါနော်..။ စာတွေဒိထက်မက အများကြီးရေးသားနိုင်ပါစေ။
sonata-cantata said on September 1, 2011 at 12:03 AM
(နှာစေးလို့ ခေါင်းမြီးခြုံပြီး အိပ်နေပါသည်။)
TnT said on September 1, 2011 at 9:08 AM
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် အစ်မ။း)
Rita said on September 1, 2011 at 9:15 AM
ကံကောင်းလိုက်တာ။ ကိုယ်ဆို မမကွမ်အသံ ခုထိ မကြားဖူးသေးဘူး။ =D
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) said on September 1, 2011 at 11:35 AM
မဇွန် Europe ဖက်လာရင် တကယ် တွေ့ရမယ်နော်။ နန္ဒာ SG လာရင်လဲ အကြောင်းကြားပါ့မယ်။ မဇွန်နဲ့ လူချင်း တကယ်ဆုံချင်မိတာ။
မဇွန်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ တုံ့ပြန်မှု့ ပိုစ့်အတွက် ကြည်နူးရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သက်ဝေ said on September 1, 2011 at 3:49 PM
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ မြင်ဖူးလိုက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်... အဟီး...
လူလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စာလှလှလေးတွေ အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ ညီမဇွန်...း))
မဒမ်ကိုး said on September 2, 2011 at 8:41 AM
TZA said on September 3, 2011 at 12:16 AM
အလိုလို.. နာမည်ကျော်ဆိုပါလား.. ကိုကိုကျော်တီလို့ ပြောင်းခေါ်ရင်ပိုကျော်စရာရှိတယ်၊ ဟဲဟဲ။ ဇွန်က မှတ်ဥာဏ်သိပ်ကောင်းတယ်၊ နာမည်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပုံတွေ အားလုံးကို သတိရနေတယ်၊ ကျနော်ကတော့ အဲသလောက်ကို မမှတ်မိနိုင်တာဗျာ။ မတွေ့တာတောင်ကြာပြီ၊ (အားလုံး အားကြတဲ့တနေ့) ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့။
ဖိုးကြယ် said on September 4, 2011 at 7:38 PM
အစ်မဇွန်ရေ....အမှတ်တရနဲ့ ချိုကျကို ထည့်ရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ခုတော့ ဖိုးချိုကြယ်ကျ ဖြစ်နေပြီ :P
ဇွန်မိုးစက် said on September 4, 2011 at 9:33 PM
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။း)
ကြယ်ပြာ said on September 13, 2011 at 12:12 PM
ဇွန်ရေ .... ခုမှ ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ဖြစ်တယ် ... ဘလော့တွေမလည်တာကြာလို့လေ.. ... ကြယ်ပြာလဲ သတိရနေပါတယ် ....
khin oo may said on September 13, 2011 at 3:37 PM
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တို့ link တွေ တန်းစီတက်သွားလဲမသိ. ဆော.ဆောရီးပါ။
မမင်း said on October 17, 2011 at 3:45 PM
အရှုပ်တွေလုပ်နေလို့ အတော်နောက်ကျသွားပါတယ်။ မဇွန်သိတာ အတော်များနေပြီနော် ဟင်းဟင်း (နှုတ်ပိတ်ချင်တဲ့အသံမဟုတ်၊ အားကျဝမ်းသာသောရီသံသာဖြစ်ပါကြောင်း) စာကောင်းတွေဒီထက်ပို၍ပို၍ ဖန်တီးအောင်မြင်ပါစေ။